Al-Shabaab oo dhagartooda la gaddoontay
Afar ka tirsanaa ururka diinta Islaamka ku been abuurtay ee al-Shabaab ayaa ku dhinteen qarax ay u dhigayeen dadweynaha Muslimiinta ah ee ku sugan magaalada Lamu ee dalka Kenya inta ay ku guda jireen dhigitaanka qaraxaas.
Saddex ka mid ah afartaas dhagar-qabayaal ayaa ku dhinteen isla goobta ay ku aasayeen walxaha qarxa ee loo yaaqaanno IED ee waddada u dhow Buundada Kwa Omollo ee isku xirta magaalooyinka Booday iyo Bargoni. Kan afraad ayaa la sheegay inuu ku dhintay meel u jirto dhowr kiilomitir halka ay ku aasayeen walxaha qarxa.
Waxaa sidoo kale dhagartaas ku dhaawacmeen dhowr maleeshiyood oo ka tirsan ururka nabad-diidka ah ee al-Shabaab.
Dhanka kale, Ciidammada Midowga Afrika ee ku sugan Soomaaliya ee AMISOM waxay dhawaan magaalada Beled-Aamiin ee Shabeellada Hoose ku qabteen dhagar-qabe ka tirsan ururka al-Shabaab kaasoo sitay 6 ah rimoodyada lagu qarxiyo bamka.
Warbixin ka soo baxday AMISOM ayaa lagu sheegay in rimoodyadaas loo adeegsado qarxinta bamyada ay maleeshiyada al-Shabaab ku aasaan waddooyinka muhiimka ah ee ay isticmaalaan dadweynaha iyo burburinta gaadiidka xamuulka iyo in dhagar-qabayahaas lagu wareejiyay laamaha amniga ee Soomaaliyeed.